Cali cabdow: Maalin walba labo Haween Soomaaliyeed ayay Ciidmaada Itoobiya qaadsiiyaan cudurka AIDS-ka
Warar: July 29, 2007
Cali cabdow "Maalin walba labo Haween Soomaaliyeed ayay Ciidmaada Itoobiya qaadsiiyaan cudurka AIDS-ka".
C/llaahi Yuusuf "Waan ka damqaday wixii ka dhacay....."
Qaraxyo iyo iska hor imaadyo ka dhacay Muqdisho
Geedi oo Magaalada Adis-Ababa kulan kula yeeshay Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Faransiiska.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ereteriya Cali Cabdow Axmed ayaa mar uu u waramayey taleefishinka Al-Jasiira waxa uu sheegay in dhibaatada ka taagan Soomaaliya ay ugu wacan tahay CIidmaada Itoobiya oo uu sheegay.
"Maalin walba waxaa la gumaadaa Ummadda Soomaaliyeed, waxaana laga buuxiyaa xabsiyada" ayuu yiri Wasiirka arrimaha Dibadda ee Ereteriya, waxa uuna intaa raaciyey"waxaan ogaanay in maalin walba labo haween Soomaaliyeed Ciidamada Itoobiya qaadsiiyaan Cudurka AIDS-ka, marka ujeedada Itoobiya waa sidii ay uga aarsan lahayd una baabi'in lahayd Ummada Soomaaliya".
wasiirka arrimaha dibadda waxa uu beeniyey warar dhawaan ka soo yeeray ururka Midowga Afrika oo ahaa in Ereteriya ay hub gaarsiisay kooxo ka soo horjeeda Dowladda Federaalka, waxa uuna warkaasi ku tilmaamay mid aan sal iyo raad toona laheyn oo ladoonayo in lagu marin Habaabiyo ummadda Soomaaliyed.
Wasiirka waxa uu sheegay in Dhibaatada Soomaaliya aysan marnaba degi doonin tan iyo inta ay Dowladda Itoobiya faragelinta ku hayso arrimaha Soomaaliya, isagoo soo jeediyey in arrimaha Soomaaliya loo madax banaaneeyo ummadda Soomaaliyeed.
Madaxweyne C/llaahi Yuusuf Axmed oo hadda booqasho ku jooga Magaalada Madaxda Maamul Gobaleedka Puntland ee Garoowe ayaa mar uu kulan la yeeshay odoyaal iyo waxgarad ka tirsan Maamulkaasi ayaa waxauu sheegayin uu si dhaqsi leh waxa uga qaban doono xaaladda ka taagan maamulkaasiee la xiriirta dhinaca nabadgelyada iyo Maciishada.
C/llaahi Yuusuf waxa uu sheegay in wixii ka dhacay Maamul Gobaleedka Puntland uu si aad ah uga damqaday, isagoo sheegay in talaabo laga qaadi doono wixii sababay in dadweynuhu qayliyaan kana damqadaan maciishada cirka isku shareertay.
C/llaahi Yuusuf waxa uu sheegay in ay jiraan dad doonaya in ay qalqalgeliyaan ammaanka iyo xasiloonida ka jirta maamul Gobaleedka Puntland, hase yeehsee carabka kuma dhifan dadkaasi.
WAxgaradkii iyo Odoyaashii ka qaybgalay kulankaasi ayaa waxay ka codsadeen Madaxweyne C/llaalhi Yuusuf Axmed in u Talaabo ka qaado dadka cunqabateynta maamul gobaleedka Puntland, waxay kaloo ka codsadeen in isbedel lagu sameeyo maamulka Puntland gaar ahaan maamulada hooose.
C/llaahi Yuusuf waxa uu isla shalay kulan deg deg ah la yeeshay maamul Gobaleedk aPuntland oo ay ka wada hadleen xaaladda ka taagan maamul Gobaleedka Puntland sida nabadgelyada iyo sicir bararka, isagoo sheegay in xiriir iskaashi uu ka dhexeeyo Dowladda Federaalka iyo Maamulo Gobaleedka Puntland loona baahan yahay in arrintasi la sii adkeeyo.
wAxaa la filayaa in C/llaahi Yuusuf uu saacadaha soo socda gaaro magaalada Boosaaso, halkaas oo uu kulamo kula yeelan doono dadweynaha ku nool Boosaaso.
Waxaa Magaalada Muqdisho weli ka sii socda qaraxyada iyo iska hor imaadyada ka jira oo u dhexeeye ciidamada Dowladda iyo kuwa Itoobiya oo isku dhinc ah iyo kuwa ka soo horjeeda, waxayna iska horimaadyo ka fool ka fool ka dhaceen meel ay deganaayeen ciidamada Dowladda Federaalka ooku taala agagaarka Xayle Bariise ee Deegaanka Heliwaa,waxaana la isku adeegsada hubka noocyadiisa kala duwan, waxaana la sheegay in dad rayid ah ka soo gaartay khasaaro rasaastii la siweydaarsaday, sidoo kale ciidamada Itoobiya ee degan Warshaddii hore ee Baastada, iyadoo rasaastii ay rideen ciidamada Itoobiya ay ku dhaawacmeen labo qofood oo deganaa suuqa Xoolaha, sidoo kale shalay subaxnimadii ayaa weerar banbaano ka dhacay Isgoyska Black Sea waxaana ku dhaawacmay labo qofood.
Qaraxyadan ayaa waxay sii xoogeysteen maalmihii ugu dambeeyey, iyadoo ay dhibaato ka soo gaareyso dad rayid ah oo aan waxba galabsan, ilaa iyo haatan wax natiijo ah oo soo kordhay oo ku aadan sidii qalalaasaha loo joojin lahaa ma jiraan, iyadoo ay maalin walba Magaalada Muqdisho baairtaano ka wadaan Ciidamada Itoobiya iyo kuwa Dowladda Fedreaalka.
wararka naga soo gaaraya magaalada Adis-Ababa waxay sheegayaan in Ra'isul Wasaare Cali Max'ed Geedi uu halkaasi kulan kula yeeshay wasiirka arrimaha DIbadda ee dalka Faransiiska, waxayna isla soo qaadeen taakuleynta Ummadda Soomaaliyeed iyo waliba ka miro dhallinta Shirka Dib u heshiisint Ummadda Soomaaliyeed.
Ra'isul Wasaare Geedi waxa uu uga warbixiyey Wasiirka Faransiiska xaaladda Soomaaliya gaar ahaan Magaalada Muqdisho, waxa uuna sheegay in xaaladda Magaalada Muqdisho ay haatan ka soo reyneyso, isagoo sheegay in arintaasi ay gacan ka gaysteen Dowladda Federaalka oo gacanka helaya kuwa Itoobiya, dhinaca kale xildhibaano ka tirsan Dowladda Federaalka ayaa ka hor yimid kulan dhex maray Geedi iyo Wasiirka arrimaha Dibadda Faransiiska, iyagoo ku tilmaamay mid lagu baabi'inayo qarannimadii Soomaaliya, waxayna sheegeen Xildhibaanadaan aysan weli dhicin in wafdi lagu qaabilo dal kale, waxayna sheegee xildhibanaadaasi in xubno ka sareysa wasiir arrimo dibadeed ay tageen magaalada Muqdisho ay kulamo la yeesheen xubnaha Dowladda Federaalka.
Midowga Yurub ayaa iyagu aaminsan in Magaalada Muqdisho aysan ka jirin xasilooni la isku haleyn karo, waana midda midda keentay in Ra'isul Wasaaraha soomaaliya iyo wasiirka arrimaha dibadda Faransiisku ku kulmaan Itoobiya.
Doodii Moshinka Baarlamaanka DFKMG ee ka Dhanka ahayd xukuumada Prof. Geedi oo weji kale isu rogtay (Qaybtii 3aad ee doodda) - July 29
MADAX SARE OO HAY'ADDA CARE KA TIRSAN OO SOCAAL KU MARAY KARKAAR (DAAWO SAWIRO)
Dagaallo ciidammada cadowga lagu waxyeelleeyay.
.Booliiska iyo Milatariga oo isku haya gacan ku haynta Suuqa
.Geedi oo la sheegay in Adis-Abab u tagay sidii uu Meles..
.C/llaahi Yuusuf oo gaaray Magaalada Garoowe...
.Haweenay Yuhuudiyad ah oo islaamtay, Falastiina ugu..
.Dadweynaha Muqdisho oo ka walwalsan dadka lala baxayo
Wararka oo dhan ka akhri halkan... July 28
Ciyaarihii ugu dambeeyey ee EuroSom iyo Qado sharaf
Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Washington DC oo deeq soo gaarsiiyey dadkii ku waxyeeloobay dagaalada - July 27
Xubno ka tirsan Xiriirka Soomaaliyeed ee K/cagta oo ka qaybgalay Siminaarkii dalka Marooko - July 27